I-Contented Acres - Indawo ephumulele eduze kwaseDuluth
Esko, Minnesota, i-United States
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Courtney & Dustin
Siyakwamukela ku-Contented Acres! Leli khaya elihle elakhiwe ngokwezifiso litholakala endaweni enokuthula eyi-14 acres imizuzu nje ukusuka eDuluth, Jay Cooke, Munger Trail, Spirit Mountain. Izibuyekezo zakamuva zifaka (kodwa azikhawulelwe) kupende omusha, omatilasi, amalineni, nefenisha. Singabanikazi abasha futhi asikwazi ukulinda ukwabelana nawe ngekhaya lethu - siyazi ukuthi uzolithanda njengoba senza!
I-Contented Acres itholakala imizuzu engama-20 eningizimu yeDuluth kumahektha ayi-14 angasese, anokuthula. Leli khaya laqala njengendlu yakudala enegumbi elilodwa lamapulangwe e-Finnish eyakhiwe ngo-1910 futhi selishintshiwe laba ikhaya lesitayela sokulala elakhelwe ngokwezifiso namuhla elingalala ngokunethezeka. izici, ilungele imibhangqwana, imindeni, nabangane abafuna indawo ecashile ngaphandle kokuba kude nendawo ekhangayo! Kungakhathaliseki ukuthi unethemba lokuhlehla futhi ujabulele imisindo yemvelo ngenkathi uphuza ikhofi noma ingilazi yewayini kuvulandi, noma ulangazelele ukushaya imithambeka e-Spirit Mountain noma ibhayisikili eduzane ne-Munger Trail, sinakho konke okudingayo phumula, khulula, futhi usethe kabusha.
Ngaphezulu kwamamitha-skwele angu-5,600, ikhaya lethu linamaleveli amathathu anamagumbi okulala ayi-7 (okuhlanganisa negumbi elingaphansi elakhelwe ngaphakathi elinendlu yokudlala), kanye nezindlu zokugezela eziyi-4.5 ezifakwe amathawula ahlanzekile nezinto zangasese. Ukuhamba nengane encane? Umbhede ophathwayo we-Pack n’ Play unikiwe (sicela uqaphele ukuthi ama-pack n' play sheets awanikeziwe).
+ I-Master Suite ene-King Bed, I-Master Bath enobhavu we-Jacuzzi kanye ne-Walk-In Shower
+ I-Second Master Suite ene-King Bed
+ Amakamelo okulala amabili aphezulu anemibhede yendlovukazi
+ Igumbi Lokulala Eliphezulu Elakhelwe Ngaphakathi Nemibhede Emi-4 Yamawele, I-Playhouse, ne-Playroom enamathiselwe efakwe umtapo wezincwadi wezingane, amathoyizi, nemidlalo
+ Igumbi lokugezela eligcwele Phezulu
+ Indawo yehhovisi ene-Futon (umatilasi ophelele) kanye ne-Portable Pack n’ Play Crib
+ Igumbi lokugezela elikhulu eliphansi
+ Amagumbi okugezela amabili agcwele esitezi esingezansi, ngalinye linama-Walk-In Shower amabili
+ Igumbi lokulala eliphansi eline-Queen Bed
Ikhishi elikhulu lihlome ngokuphelele ngazo zonke izinto ezibalulekile zokupheka ezihlanganisa isiqandisi/isiqandisi sensimbi engagqwali, isitofu segesi esishisisa ama-6 esine-griddle, uhhavini ophindwe kabili (okubandakanya i-oven convection), i-microwave, nomshini wokuwasha izitsha ukwenza ukusingathwa kwamaqembu amakhulu kube nomoya oshisayo. Ikhishi lifaka ama-soapstone countertops kanye nesiqhingi esinendawo eningi yokuzijabulisa neyokulungiselela.
Wonke umuntu angajabulela ukudla okwabelwana ngakho kanye nokuhleka endaweni yokudlela, ehlanganiswe nesakhiwo sogodo esivundlile esiqoshwe ngesandla sendlu yelogi. Hamba uphume endaweni yokudlela uye egcekeni elingemuva futhi ujabulele ukudlala imidlalo yasegcekeni (i-croquet, i-bag toss, nesitebhisi segalofu esihlinzekiwe), ukosa ama-burger, noma isikhathi ndawonye uwosa ama-marshmallow eduze komgodi womlilo!
Egumbini eliyisikwele esingu-1,200 square foot Room elinendawo yomlilo eyakhiwe ngokwezifiso yetshe lensipho kanye nendawo yokufunda, ungathola ubumnandi ngenye yezincwadi ezinikeziwe, ujabulele ingxoxo enhle nabangani, noma uqale umdlalo webhodi.
Kusukela endaweni engaphansi kwe-walkout, ungabuka ukuboniswa okumangalisayo kwezinkanyezi noma ujabulele amahektha ayi-15 agcwele amasimu nezinkuni.
Ngezinyanga ezibandayo, i-Contented Acres ihlinzeka ngendawo ethokomele yokuphumula noma ukuxhumana nabangane nomndeni. Kusukela ezinhlobonhlobo eziningi zezincwadi nemidlalo, ukuya kumatafula e-ping pong nawe-foosball, kunesikhala esiningi nezinketho zokuzijabulisa nokuzilibazisa ngenkathi usahleli.
Kulo lonke ikhaya kunezinsiza eziningi, okuhlanganisa:
+ Umenzi wekhofi onekhofi elihambisanayo, izihlungi, ukhilimu noshukela
+ Igrill yamalahle (sicela uqaphele, amalahle awanikeziwe ngalesi sikhathi)
+ Umgodi womlilo onezinkuni ezinikiwe
+ Umoya ophakathi
+ Iphepha lasendlini yangasese, amathawula ephepha, amalineni, i-shampoo & conditioner, isomisi sezinwele, insipho yezitsha, okokugeza izitsha, insipho yesandla, usawoti & pepper namafutha omnqumo
+ 2 ama-TV. I-Great Room TV ixhunywe kusistimu yomsindo ezungezile futhi i-TV yesathelayithi ehambisanayo ihlinzekwa kuwo womabili ama-TV.
+ Izingidi zeminyango ezihlakaniphile zokungena nokuphuma okungenakhiye
+WiFi - SICELA UQAPHELE: Ngenxa yomhlinzeki oyedwa womthombo endaweni, isivinini se-WiFi singanqunyelwa.
+ Indawo yomlilo yegesi yangasese ku-Master Suite
+ Isipikha se-Bluetooth
+ Ibhavu ye-jacuzzi yangasese ku-Master Suite
+ Iwasha estakiwe nesomisi ngensipho yokuwasha
+ Nokunye okwengeziwe
Emiphakathini engomakhelwane yaseDuluth, Esko, Cloquet, naseCarlton, uzothola izinhlobonhlobo zezinto ongazijabulela unyaka wonke. Ezinye zezinto ezikhangayo nemicimbi emikhulu yaseDuluth ihlanganisa iGrandma’s Marathon, iBentleyville Christmas lights exhibit, kanye ne-Bayfront Blues Festival. Indawo yokudlela ka-Cloquet's Gordy's Hi-Hat Restaurant idume ngamabhega, izinhlanzi, nama-malts futhi yafakwa ku-Food Network's Diners, Drive-Ins, and Dives. Jabulela i-Whitewater Rafting eqondiswa ubungcweti ku-St. Louis River eseduze, jaha imibala yokuwa e-Minnesota's North Shore, noma ujabulele usuku lokushushuluza emithambekeni ye-Spirit Mountain. Eduze kwe-Jay Cooke State Park inikeza imizila engaphezu kwamamayela angu-100 yokuhamba ngezinyawo, ukuhamba ngebhayisikili, ukugibela amahhashi, ukushushuluza eqhweni, ukushushuluza eqhweni, nokuhamba eqhweni.
INDLELA YOKUSHAYELA UKUYA:
+ I-Duluth: 10.1 mi
+ I-Munger Trail Trailhead: 9.8 mi
+ Indawo Yokuzilibazisa Yentaba Yomoya: 9.2 mi
+ I-Minnesota Whitewater Rafting: 6.0 mi
+ I-Cloquet: 5.6 mi
+ I-Black Bear Casino Resort: 10.6 mi
+ I-Endurance Kennels LLC (i-dog sledding): 35.4 mi
+ Amachweba Amabili: 43.8 mi
(Ikhredithi yesithombe: Laura Jean Media Services)
I-Esko itholakala enkabeni ye-Spirit Mountain Ski Hill, Jay Cooke State Park, kanye nedolobha elikhulu laseDuluth eLake Superior. Indawo yethu ikuvumela ukuthi uzizwele kanye nokuba yimfihlo kwedolobhana elincane elikwazi ukufinyeleleka kalula endaweni enkulu yaseDuluth. Siyakwamukela ukuthi ujabulele ikhaya lethu lesi-2 elithandekayo futhi sithemba ukuthi ukuhlala kwakho nathi ngeke kulibaleke!
+ Duluth: 18.2 mi
Ibungazwe ngu-Courtney & Dustin
Siyatholakala njengoba kudingeka - sicela ungangabazi ukusithinta.
UCourtney & Dustin Ungumbungazi ovelele